NUG အစိုးရကို နားလညျပေးဖို့လိုကွောငျး ကိုတဇောဆနျးပွော – Cele Lover
NUG အစိုးရကို နားလညျပေးဖို့လိုကွောငျး ကိုတဇောဆနျးပွော
ယခုဆိုရငျ ကနြျောတို့ “အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ” (NUG) က စဈအာဏာရှငျစနဈ အမွဈပွတျ တှနျးလှနျရေး၊ ပွညျသူလူထုကို ကာကှယျရေးအတှကျ “ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျမတျော” (PDF) ကို ဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီး ဖွဈတယျ။ ကနြျောတို့လူထုအနနေဲ့ ပွညျသူ့တပျမတျော PDF ကို အငျအားရှိသထကျ ရှိလာအောငျ ပူးပေါငျးပါဝငျဆောငျရှကျကွဖို့၊ အဖကျဖကျက အားပေးကူညီကွဖို့ အထူးအရေးကွီးလာပါတယျ။
NUG ရဲ့ကွိုးပမျးမှု၊ တိုငျးရငျးသားတျောလှနျရေး အဖှဲ့အစညျးမြားရဲ့ ကူညီမှုနဲ့ ပွညျသူလူထုရဲ့ ပါဝငျမှုတို့ကနေ ဖွဈတညျလာတဲ့ PDF သညျ လူထုကို ကာကှယျပေးမယျ့၊ အနာဂတျ ဖကျဒရယျတပျမတျော၏ ရှပွေ့ေးအမွုတဖွေဈမယျ့ အငျအားကွီးပဲ ဖွဈပါတယျ။ NUG အနနေဲ့ PDF ဖှဲ့စညျးလိုကျတာနဲ့အညီ ကာကှယျရေးဆိုငျရာ ဆကျလကျဆောငျရှကျရနျ ကိစ်စမြားကိုလညျး အခြိနျနဲ့တပွေးညီ ဆောငျရှကျနမေယျလို့ သိရှိနားလညျရပါတယျ။ ဒီလုပျငနျးစဉျ‌တှအေတှကျ အခြိနျတဈခု ယူရတာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီအတှကျ ကနြျောတို့ နားလညျပေးဖို့ လိုပါမယျ။
ဒီအခြိနျမှာပဲ ကနြေျာ့အနနေဲ့ ပွညျသူလူထုကို အရေးတကွီး တငျပွဆှေးနှေးလိုတာ ရှိလာပါတယျ။ ကနြျောတို့ ပွညျသူလူထု လကျရှိဆောငျရှကျနတေဲ့ လမျးမထကျက လူထုသပိတျဆန်ဒပွမှုတှေ၊ CDM လှုပျရှားမှုတှေ၊ လူထုရဲ့ “ဘူး” သပိတျတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍနဲ့ (အသကျတမြှ) အရေးပါမှုအကွောငျးပါ။
အာဏာသိမျးစဈကောငျစီရဲ့ ရကျရကျစကျစကျ အကွမျးဖကျမှုတှကွေောငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ မတျလကုနျလောကျကစပွီး ပွညျသူလူထုကွားထဲမှာ အကွောကျတရားတှေ သိသိသာသာ ပြံ့နှံစိုးမိုးလာပါတယျ။ ဒါကလညျး လူထုကို အပွဈတငျစရာမရှိပါဘူး။ ဒီလောကျ လူထုအပျေါ အကွမျးဖကျ၊ သတျဖွတျ၊ နှိပျစကျနတေဲ့ကွားက ဒီလောကျထိ လူထုသပိတျလှုပျရှားမှု၊ CDM Movement တှေ ဆကျရှိနတောကိုက လူထုကို အငျမတနျ ဂုဏျပွု၊ လေးစားထိုကျနပေါပွီ။ အခုဆို အာဏာသိမျးစဈအုပျစုရဲ့ အကွမျးဖကျရကျစကျမှုမြား၊ အငျတာနကျ ဖွတျတောကျမှုကွောငျ့ သတငျးအခကျြအလကျ ပကျြတောကျမှုမြားကွောငျ့ လမျးမထကျ သပိတျတှကေ တဈစုံတဈရာ အငျအားနညျးလာသလို ရှိလာပါတယျ။
အခြို့ကတြော့လညျး ဒီသပိတျ/CDM Movement တှရေဲ့ အရေးပါမှုနဲ့ အခနျးကဏ်ဍကို လြော့တှကျတာမြိုး ရှိနိုငျပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ ဒါတှကေ လိုအပျသေးလို့လား၊ အကြိုးရှိရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခှနျးမြိုးတှေ ရှိနိုငျပါတယျ။ ကနြျောတို့အနနေဲ့ လကျရှိဆောငျရှကျနကွေတဲ့ သပိတျဆန်ဒပွမှုမြားနဲ့ CDM လှုပျရှားမှုတို့ရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးနဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှုမြားကို လြော့မတှကျသငျ့ပါဘူး။ ဒီသပိတျလှုပျရှားမှုတှကွေောငျ့ အကွမျးဖကျအာဏာသိမျးစဈအုပျစုကို လူထုက လကျမခံဘူး၊ ဆနျ့ကငျြတယျဆိုတဲ့ သတငျးစကားက အခြိနျတိုငျးမှာ ကမ်ဘာကိုကော၊ မွနျမာကိုပါ ပွနျ့နှံ့စခွေငျး ဖွဈတယျ။ စဈကောငျစီသညျ တရားမဝငျ၊ အာဏာသိမျးအုပျစုဖွဈတယျဆို ကနြျောတို့ လူထုသပိတျတှကေ အကောငျးဆုံး သကျသထေူနကွေခွငျး ဖွဈတယျ။
ဒီအခြိနျမှာ ဒီသပိတျလှုပျရှားမှုတှကေ လုံးလုံး အသုံးမဝငျတော့ဘူးဆိုတာမြိုးကလညျး လုံးဝ မဟုတျပါဘူး။ ခတျေအဆကျဆကျ အာဏာရှငျအဆကျဆကျ မကွားခငျြဆုံးအသံက ကနြျောတို့ လူထုရဲ့ “ဒို့အရေး” ဆိုတဲ့ အသံပဲ ဖွဈပါတယျ။ လူထုရဲ့ “ဒို့အရေး” အသံသညျ စဈအာဏာရှငျမှနျသမြှကို ကွောကျဒူးတုနျစပေါတယျ။ နောကျဆုံး‌ပွောရရငျ ညသံပုံးတီးသံကအစ သူတို့ကို မြားစှာဒုက်ခပေးပါတယျ။ ဒါတှအေားလုံးက အကွမျးဖကျစဈအုပျစုရဲ့ တရားမဝငျမှု သရုပျမှနျကို ဖျောပွနကွေခွငျး ဖွဈပါတယျ။ နောကျ၊ လူထုသပိတျတှနေဲ့ CDM ဆိုတာကလညျး တဈခုနဲ့တဈခု အပွနျအလှနျ အမှီသဟဲ ပွုနကွေပါတယျ။ ကနြျောတို့ လူထုသပိတျရခြေိနျ ကသြှားတာနဲ့ အာဏာရှငျက CDM လှုပျရှားသူတှကေို ပိုပွီးဖိနှိပျလာမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ကနြျောတို့ လူထုအနနေဲ့ ဒီသပိတျဆန်ဒပွမှုမြား၊ CDM လှုပျရှားမှုမြားကို ဆကျလကျဆငျနှဲကွဖို့က အထူးအရေးကွီးကွောငျး၊ ဒီလှုပျရှားမှု‌တှအေပျေါမှာ စိတျလြော့၊ အားလြော့လိုကျလို့ မဖွဈသေးကွောငျး လေးစားစှာ တငျပွလိုပါတယျ။ ကနြျောတို့ စဈအာဏာရှငျကို အသှငျပုံစံမြိုးစုံ၊ နညျးလမျးပေါငျးစုံနဲ့ ဆကျလကျ တှနျးလှနျကွပါစို့။
ကနြျောတို့ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေ ကွီးမားတယျ။ ကနြျောတို့က အကိုငျးအခတျကို ခုတျ‌နတောမဟုတျ၊ အမွဈကို နှုတျနကွေတာမဟုတျလား။ ဒီခရီးအတှကျ ကနြျောတို့ သကျလုံ ကောငျးရပါလိမျ့မယျ။ နတျစီတဲ့ အိပျမကျလှလှမြား လှယျလှယျနဲ့ မရနိုငျ။ ဒီ ၂၀၂၁ နှဦေးတျောလှနျရေးမှာ ပေးဆပျခဲ့ရတဲ့ အသကျတဈခြောငျးခငျြး၊ သှေးတဈစကျ ခြှေးတဈစကျခငျြးစီအတှကျ ကနြျောတို့ တရားမြှတမှု ပွနျလညျရယူရပါလိမျ့မယျ။
NUG အစိုးရကို နားလည်ပေးဖို့လိုကြောင်း ကိုတေဇာဆန်းပြော
ယခုဆိုရင် ကျနော်တို့ “အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ” (NUG) က စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ် တွန်းလှန်ရေး၊ ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်ရေးအတွက် “ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်” (PDF) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့လူထုအနေနဲ့ ပြည်သူ့တပ်မတော် PDF ကို အင်အားရှိသထက် ရှိလာအောင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့၊ အဖက်ဖက်က အားပေးကူညီကြဖို့ အထူးအရေးကြီးလာပါတယ်။
NUG ရဲ့ကြိုးပမ်းမှု၊ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ကူညီမှုနဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ပါဝင်မှုတို့ကနေ ဖြစ်တည်လာတဲ့ PDF သည် လူထုကို ကာကွယ်ပေးမယ့်၊ အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်၏ ရှေ့ပြေးအမြုတေဖြစ်မယ့် အင်အားကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့ PDF ဖွဲ့စည်းလိုက်တာနဲ့အညီ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စများကိုလည်း အချိန်နဲ့တပြေးညီ ဆောင်ရွက်နေမယ်လို့ သိရှိနားလည်ရပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်‌တွေအတွက် အချိန်တစ်ခု ယူရတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျနော်တို့ နားလည်ပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ ကျနော့်အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို အရေးတကြီး တင်ပြဆွေးနွေးလိုတာ ရှိလာပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထု လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ လမ်းမထက်က လူထုသပိတ်ဆန္ဒပြမှုတွေ၊ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ လူထုရဲ့ “ဘူး” သပိတ်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ (အသက်တမျှ) အရေးပါမှုအကြောင်းပါ။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လကုန်လောက်ကစပြီး ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာ အကြောက်တရားတွေ သိသိသာသာ ပျံ့နှံစိုးမိုးလာပါတယ်။ ဒါကလည်း လူထုကို အပြစ်တင်စရာမရှိပါဘူး။ ဒီလောက် လူထုအပေါ် အကြမ်းဖက်၊ သတ်ဖြတ်၊ နှိပ်စက်နေတဲ့ကြားက ဒီလောက်ထိ လူထုသပိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ CDM Movement တွေ ဆက်ရှိနေတာကိုက လူထုကို အင်မတန် ဂုဏ်ပြု၊ လေးစားထိုက်နေပါပြီ။ အခုဆို အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုများ၊ အင်တာနက် ဖြတ်တောက်မှုကြောင့် သတင်းအချက်အလက် ပျက်တောက်မှုများကြောင့် လမ်းမထက် သပိတ်တွေက တစ်စုံတစ်ရာ အင်အားနည်းလာသလို ရှိလာပါတယ်။
အချို့ကျတော့လည်း ဒီသပိတ်/CDM Movement တွေရဲ့ အရေးပါမှုနဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို လျော့တွက်တာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဒါတွေက လိုအပ်သေးလို့လား၊ အကျိုးရှိရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ သပိတ်ဆန္ဒပြမှုများနဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုတို့ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျော့မတွက်သင့်ပါဘူး။ ဒီသပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကို လူထုက လက်မခံဘူး၊ ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းစကားက အချိန်တိုင်းမှာ ကမ္ဘာကိုကော၊ မြန်မာကိုပါ ပြန့်နှံ့စေခြင်း ဖြစ်တယ်။ စစ်ကောင်စီသည် တရားမဝင်၊ အာဏာသိမ်းအုပ်စုဖြစ်တယ်ဆို ကျနော်တို့ လူထုသပိတ်တွေက အကောင်းဆုံး သက်သေထူနေကြခြင်း ဖြစ်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ ဒီသပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေက လုံးလုံး အသုံးမဝင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးကလည်း လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ ခေတ်အဆက်ဆက် အာဏာရှင်အဆက်ဆက် မကြားချင်ဆုံးအသံက ကျနော်တို့ လူထုရဲ့ “ဒို့အရေး” ဆိုတဲ့ အသံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုရဲ့ “ဒို့အရေး” အသံသည် စစ်အာဏာရှင်မှန်သမျှကို ကြောက်ဒူးတုန်စေပါတယ်။ နောက်ဆုံး‌ပြောရရင် ညသံပုံးတီးသံကအစ သူတို့ကို များစွာဒုက္ခပေးပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးက အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ တရားမဝင်မှု သရုပ်မှန်ကို ဖော်ပြနေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်၊ လူထုသပိတ်တွေနဲ့ CDM ဆိုတာကလည်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အပြန်အလှန် အမှီသဟဲ ပြုနေကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ လူထုသပိတ်ရေချိန် ကျသွားတာနဲ့ အာဏာရှင်က CDM လှုပ်ရှားသူတွေကို ပိုပြီးဖိနှိပ်လာမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ လူထုအနေနဲ့ ဒီသပိတ်ဆန္ဒပြမှုများ၊ CDM လှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက်ဆင်နွှဲကြဖို့က အထူးအရေးကြီးကြောင်း၊ ဒီလှုပ်ရှားမှု‌တွေအပေါ်မှာ စိတ်လျော့၊ အားလျော့လိုက်လို့ မဖြစ်သေးကြောင်း လေးစားစွာ တင်ပြလိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ စစ်အာဏာရှင်ကို အသွင်ပုံစံမျိုးစုံ၊ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ဆက်လက် တွန်းလှန်ကြပါစို့။
ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ချက်တွေက ကြီးမားတယ်။ ကျနော်တို့က အကိုင်းအခတ်ကို ခုတ်‌နေတာမဟုတ်၊ အမြစ်ကို နှုတ်နေကြတာမဟုတ်လား။ ဒီခရီးအတွက် ကျနော်တို့ သက်လုံ ကောင်းရပါလိမ့်မယ်။ နတ်စီတဲ့ အိပ်မက်လှလှများ လွယ်လွယ်နဲ့ မရနိုင်။ ဒီ ၂၀၂၁ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ အသက်တစ်ချောင်းချင်း၊ သွေးတစ်စက် ချွေးတစ်စက်ချင်းစီအတွက် ကျနော်တို့ တရားမျှတမှု ပြန်လည်ရယူရပါလိမ့်မယ်။
အောင်မောင်း၊ တောင့်ထား . . .
Previous Article ထောငျထဲမှာပဲဖွတျသနျးနရေတဲ့ ကိုလူမငျးရဲ့(၅၁)နှဈပွညျ့မှေးနအေ့တှကျ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျတဲ့ မငျးမျောကှနျး
Next Article ရုပျရှငျရုံမြားပွနျဖှငျ့ရငျ ပထမဦးဆုံးပှဲထှကျ ယုနျလေး ဇတျကားတငျမညျ